Soo dejisan Free Easy CD DVD Burner 5.1.0 – Vessoft
Soo dejisan Free Easy CD DVD Burner
Free Easy CD DVD xoogeysanaya – software ah oo loogu tala galay in aad nuqulka, edit oo nadiif ah saxannada of noocyo kala duwan. Software waxa ku jira qalab si creat saxannada data, CD audio, DVD video iyo si loogu badalo files audio galay MP3 ama WAV qaabab. Free Easy CD DVD xoogeysanaya kuu ogolaanayaa inaad u aragto macluumaadka ku saabsan drive, ayaa lagu wadaa xawaaraha lagu qoro iyo nuqul ka faylasha in disk adag. Software waxa kale oo uu awood u siiyaa in la abuuro images disk iyo macluumaad store on flash eryi doonaa. Free Easy CD DVD xoogeysanaya uu leeyahay interface ah dareen leh oo u fududahay in la isticmaalo.
Abuurista Audio CD iyo DVD video
Copy, edit oo nadiif ah saxannada
Abuurista images disk
Wide qabsato awoodooda si ay ula saxannada shaqeeyaan
Free Easy CD DVD Burner Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... WinDirStat 1.1.2.80
العربية, English, Українська, Français... CDBurnerXP 4.5.7.6321